Baabuur Ka Ambababaxy Muqdisho oo Ku Gedoomey Tuulada Qalimoow, waxaana ku dhintay 12 qof.
Taariikhdu markey aheyd 15/02/03 Abaarihii 6:00pm waxaa Magaalada Muqdisho ka Ambabaxey Baabuur ku wa xamuulka qaada ah Nuuciisuna ahaa (UD) Kuna sii jeeday Maagalada Baxdo Ayna saarnaayeen Dad aad u fara badan iyo Alaabo uu u sidey maagaladaasi waxa uu ku Qalimey ama uu ku Rogmadey Tuulada QALIMOOW oo u dhaxeysa Magaalada Balcad iyo Jawhar Abaarihii 11:00pm waqtiga soomaaliya waxaana ku nafwaayey dad gaaraya 12 Qof, ku dhawaad 40 tana waa ay ku dhaawacmeen.
Dadkii uu dhaawacu ka soo gaarey Baabuurkaasi ayaa waxaa loo soo Daadgureeyey Magaalada Muqdisho si loogu daaweeyo Ayadoo loo kala qeybiyey Madiino Hospital iyo Hassanjiis HOSPITAL.
Mar aan saakey Booqdey Isbitaalka Hasanjiis waxaa ii suurtogalshey inaan la kulmo qaar ka mid ay dadkii uu Dhaawacu ka soo gaarey shilkaasi waxaana ka mid ahaa dadkii aan la kulmey MAXAMUUD MAX'ED AXDEY (MADAXEEY) iyo MAXAMED CABDI BAYLE oo ay labadooduba LUGO uga go'een Shilkaasi Naxdinta leh.
Inta badan shilalka nuucaan ah ayaa ah kuwo badanaaba ka dhaca Somaaliya Taasoo ay ugu wacan tahay Wadooyinka Baabuurta oo RAF ah ama godad badan iyo Baabuurta oo si Xad dhaaf ah loo raro taasna ay keento iyo Baabuurku Gadoomo Ayadoo aysan jirin Dawlad dhexe oo Koontorool ku sameysa hadba Rarka baabuurka la saarayo, Si kastaba ha ahaatee Shilkaan ayaa ka ah Shilalkii ugu waa weynaa ee ka dhaca Soomaaliya.
War Saxaafadeedkii Talyaaniga iyo Kiplagat
war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arimaha dibadda ee dalka kenya ayaa lagu sheegay in.... GUJI
Shir ay ku yeesheen Haweenka Ogaadeenya
Shirkan oo lagu qabtay Australia & wararka kale ee Radio Xoriyo ka akhri... XORIYO